bikro iyo siil sidee lagu gartaa - iftineducation.com
bikro iyo siil sidee lagu gartaa
iftineducation.com – Inta badan dumarku way xishood badan yihiin, siiba Marka laga hadlayo arrimaha Galmada sida nimanka oo kale naago caddaysanya inay galmo u baahan yihiin way yaryihiin siiba kuwa da’da yar oo u dhexaa 15 ilaa 29 Sano.
Marka haddii ay u baahan tahay xaaska galmo waxaa laga dareemaa waxyaalo ku tusinaya inay diyaar tahay waxaa ka mid ah :-
1- inay is qurxiso oo dhar fiican ay soo qaadato oo ay ninkeeda sugto hadduu maqan yahay.
2- inay kaftan farakacayaar ah la gasho ninkeeda.
3- inay dhar khafiif soo qaadato sida diraca oo kale iyadoo aan hoos wax ka gashanayn oo ninkeeda sidaa ku soo ag fariisato ama hortiisa ku foofoorarsata iyadoo si daran baryaheeda u muujinaysa oo iska dhigaysa inay wax dhulka ka gurbinayso.
5-In ay isku Xanaajiso hadii uu dhaqsi Sheekada la fahmi waayo si uu u barbaryo sidaasina uu dareen ku dhasho.
biya baxa fudud iyo biyaha raga oo daaha